မြကျွန်းသာမိုးကုတ်ရိပ်သာ | Mya Kyun Thar isanewly founded Meditation Centre headed by Venerable Dr. Ashin Parami. It is situated in the Yadanarkyun Ward, Thunandar Road, North Okkala, Yangon, Myanmar. It follows the technique of Mogoke Sayadaw Phayargyi, an eminent meditation master in 1960s. | Page 29
Prepositional phrase ဟာ preposition တစ်ခုနဲ့ noun phrase တစ်ခုပေါင်းစပ်ဖွဲ့စားထားတာဖြစ်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်များစွာအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Adverbials of time and place We will be back inafew days. They drove to Glasgow. Postmodifier inanoun phrase Helen is the girl in the red dress. We’ve gotanew television withathirty one inch screen. To show who did something The lion was killed […]
အပေါင်းအသင်း မှန်ပါစေ (၂)
လောဘပေါ်ရင် လောဘအတိုင်းမထားဘဲ ဖြစ်ပျက်ရှုဖို့ အရင်နေ့က ပြောခဲ့ပြီ။ ဒီအတိုင်းပဲ ဒေါသလေး ပေါ်လာရင်လဲ ဒေါသအတိုင်း ထားရင်တော့ ကြောက်ရမှာပါပဲ။ ဒေါသလေးပေါ်ရင် ကိုယ့်သန္တာန်မှာ သင်္ခါရက္ခန္ဓာလေး ပေါ်တယ်၊ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ ပေါ်လာတာပဲလို့ ယုံကြည်ထားလိုက်။ ယုံကြည်တဲ့အတိုင်း ပညာနဲ့ ပေါင်းပြီး ကြည့်လိုက်တော့ ဒေါသက အနိစ္စဖြစ်သွားတယ်။ ဒီတော့ ဒေါသက ဖြစ်ပျက်၊ ပညာက မဂ်။ အပါယ်မပို့တော့ဘူး။ ဘာကြောင့် အပါယ်မပို့တာလဲ ဆိုရင် အပေါင်းအသင်းမှန်သွားလို့။ ဥပါဒါန်နဲ့ ပေါင်းရင် ခက်ပြီ၊ ကံနဲ့ပေါင်းရင်လဲ ခက်ပြီ။ အခုတော့ ဉာဏ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက် ရန်သူသည်ပင် ကိုယ့်အကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့သူ ဖြစ်သွားတယ်။ လောဘ၊ ဒေါသဟာ အရင်က ရန်သူပဲ၊ အခုတော့ သဒ္ဓါ ပညာနဲ့ ပေါင်းလိုက်လို့ မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီး မဂ်ပေါ်အောင် ကျေးဇူးပြုသွားတယ်။ ဒါဖြင့် အကုသိုလ်တိုင်း ကြောက်ဖို့ မလိုဘူး၊ အပေါင်းအသင်းတည့်ဖို့သာ […]
Noun phrase အဖြစ်နဲ့ အများအားဖြင့် noun တစ်ခု၊ သို့မဟုတ် pronoun တစ်ခုသာ သုံးလေ့ရှိတယ်။ People like to have money. I am tired. It is getting late. Determiner နဲ့ noun တွဲသုံးတာလဲ ရှိတယ်။ Our friends have boughtahouse in the village. Those houses are very expensive. Adjective လဲ ပါကောင်းပါနိုင်တယ်။ Our closest friends have just boughtanew house in the village. ရံခါ noun phrase ကို […]
ကုသိုလ်သည် ဒုက္ခရောက်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့ ဒုက္ခလွတ်တဲ့ကုသိုလ် သို့မဟုတ် နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ ကုသိုလ်နဲ့ နိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့ ကုသိုလ်လို့ နှစ်မျိုးရှိတယ်။ အကုသိုလ်ကလဲ အပါယ်ရောက်တဲ့ အကုသိုလ်နဲ့ အပါယ်မရောက်တဲ့ အကုသိုလ်ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ ရှေးဦးစွာ မှတ်ထားလိုက်။ ဒီလို ကုသိုလ်တွေက ဒုက္ခရောက်စေနိုင်သလို နိဗ္ဗာန်ထိအောင်လဲ ရောက်စေနိုင်တာ၊ အကုသိုလ်တွေကလဲ အပါယ်ရောက်စေနိုင်သလို အကုသိုလ်ကို အသုံးချတတ်ရင်လဲ အပါယ်မရောက်ဘဲ ဖြစ်ရတာဟာ အပေါင်းအသင်းလွဲတာနဲ့ မှန်တာအပေါ်မူတည်နေတယ်တဲ့။ အပေါင်းအသင်းဆိုတာက လူ လူချင်းပေါင်းသင်းတာကို မဆိုလိုဘူး၊ သဒ္ဓါတရားနဲ့ ပေါင်းသင်းတာကို ဆိုလိုတယ် (သဒ္ဓါ ဒုတိယာ ပုရိသဿ ဟောတိ)။ သဒ္ဓါသည် ပေးကမ်းတာကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ဘုရား တရား သံဃာအပေါ်၌ ယုံကြည်မှုကို ဆိုလိုတာ။ သဒ္ဓါတရားနဲ့ပေါင်းတော့ ဘုရားရှင်ရဲ့ သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးဟာ အကုန်သိတယ်ဆိုတာ ယုံကြည်တယ်။ သူဟောတဲ့တရားတွေဟာ ချမ်းသာသုံးမျိုးကို ပေးနိုင်တယ်၊ ကျင့်ကြံရင် ချမ်းသာသုံးမျိုးရလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ […]
Wh- နဲ့ စတဲ့စကားလုံးတွေကတော့ what, when, where, who, which, why, how တို့ပါပဲ။ ဒီစကားလုံးတွေနဲ့ clauses တွေလုပ်လို့ရပါတယ်။ Wh- questions (See questions and negatives) What are you doing? Who ate all the pies? Why did you do that? After verbs of thinking Know, understand, suppose, remember, forget, wonder I know where you live. She couldn’t remember who he was. John wondered what was going […]
မနေ့က တဏှာသည် ခန္ဓာငါးပါးက လာတယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ တဏှာသည် ခန္ဓာငါးပါးကလာတယ်ဆိုတော့ ခန္ဓာငါးပါးမှန်း သိရင်လဲ တဏှာ မလာပါဘူး။ ခန္ဓာငါးပါးရယ်လို့ မသိလို့သာ လာခြင်းဖြစ်တယ်။ ဒါဖြင့် ကိုယ့်ခန္ဓာခင်လို့ တဏှာလာတာ၊ သားသမီးခင်လို့၊ ဆွေမျိုးခင်လို့၊ စီးပွားခင်လို့ တဏှာလာတာ။ ခန္ဓာငါးပါးကလာတဲ့ တဏှာပဲ။ ဒီခန္ဓာငါးပါးရဲ့ အပြစ်ကိုမသိတော့ တဏှာလာတယ်။ ဘယ်နှယ်ကြောင့် ခန္ဓာငါးပါး ခင်ကြတာလဲဆိုတော့ အားကိုးရလိမ့်မယ်၊ ကိုးစားရလိမ့်မယ်ထင်လို့ ခင်တာ။ ခင်တော့ ခင်တာက တဏှာ၊ တဏှာက တစ်ဆင့် ဥပါဒါန်၊ ဥပါဒါန်ကတစ်ဆင့် ကံဘက်လည်သွားတယ်။ လည်ချင်လို့လည်တာလားဆိုရင် လက်သည်ရှာတော့ ခန္ဓာခင်လို့ လည်တာ။ ဒီတော့ ခန္ဓာခင်ရင် သေပွဲတွေ အထပ်ထပ်ဝင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာ စက်ဝိုင်းအရ ရှင်းနေတယ်။ ကံကဟိုဘက် ဇာတိ ဇရာမရဏတွေ တစ်ဘ၀လဲမက အထပ်ထပ် သေပွဲတွေဝင်ရလိမ့်ဦးမယ်။ မိမိခန္ဓာ ခင်ရင်လဲ သေပွဲဝင်ရသလို သူတစ်ပါးခန္ဓာ […]
1. Yes/no questions Yes/ no ဖြေရတဲ့ questions တွေကို yes/ no questions လို့ခေါ်တာပါပဲ။ Verb ရဲ့ ပထမအစိတ်အပိုင်းကို subject ရဲ့ ရှေ့မှာထားပေးခြင်းဖြင့် question လုပ်ရတယ်။ They are working hard. Are they working hard? They will be working hard. Will they be working hard? They had worked hard. Had they worked hard? They have been working hard. Have they been working hard? They might have been […]